सिर्जना अंग्रेजी स्कुलमा एकदिने निःशुल्क दन्त तथा मुख स्वच्छता सचेतना शिविर सम्पन्न – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. सिर्जना अंग्रेजी स्कुलमा एकदिने निःशुल्क दन्त तथा मुख स्वच्छता सचेतना शिविर सम्पन्न – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
चितवन-सिर्जना ईङलिस स्कुल सरदपुर ९ भरतपुरमा एकदिने निःशुल्क दन्त तथा मुख स्वच्छता सचेतना शिविर सम्पन्न भएको छ ।
चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरको डाक्टर हरेन्द्र सिंहको नेतृत्वमा डाक्टर सुस्मिता पौडेल,डा। कल्पना थापा,डा।प्रतिक्षा गिरी,डा।कृष्टि सापकोटा लगायतको टोलीले निःशुल्क दन्त तथा मुख स्वच्छता सचेतना शिविर सम्पन्न गरिएको शिक्षक भिष्मराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
विद्यालयको प्राचार्य मुना थापाले शिबिरबाट करिव तीन सय विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको जानकारी दिइन । प्राचार्य थापाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गरेकोमा आफ्ना सबै शिक्षक स्टाप कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिन् ।
साथै कार्यक्रमका संयोजक सुविन गौतम र अविनाश न्यौपानेले डाक्टर हरेन्द्र सिंहको सम्पुर्ण टोलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । विद्यालयले शैक्षिक गतिविधि वाहेक अन्य गतिविधि समेत सञ्चालन गदैं आईरहेको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २५ मंसिर २०७८, शनिबार December 11, 2021 409 Viewed